CCTV yekutarisa PM220WE
Iri giredhi rakakura widescreen LED 21.5 ”color monitor inopa HDMI uye VGA zvinopinda. IPS pani, inozvirumbidza mamirioni 16.7 ruvara & FHD Kugadzirisa ino tarisa ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
Zviratidzo zveFHD zvinotsigirwa zvine mutsindo neiyo inokurumidza inomhanya 165hz mwero wekuzorodza kuti uone kunyangwe zvinomhanyisa-zvinoteedzana zvichitaridzika kunge zvakapfava uye zvakadzama, zvichikupa iwo iwo muwedzero kana uchitamba mutambo. Uye, kana iwe uine inoenderana AMD kadhi yemifananidzo, ipapo iwe unogona kutora mukana weiyo yakavakirwa-yakavakirwa muFreeSync tekinoroji kubvisa chidzitiro kubvarura uye stutter kana uchitamba mutambo. Iwe zvakare unokwanisa kugona kufambidzana nechero-husiku husiku mitambo yemamarathoni, sezvo iyo tarisiro iine screen mode iyo inoderedza kusvibiswa kune bhuruu mwenje kuburitsa uye kunobatsira kudzivirira kuneta kwemaziso.
Zviratidzo zveFHD zvinotsigirwa zvine mutsindo neiyo inoshamisa inokurumidza 180hz yekuvandudza mwero kuona kuti kunyangwe zvinomhanyisa-zvinoteedzana zvichitaridzika kunge zvakapfava uye zvakadzama, zvichikupa iwo iwo akawedzera kumucheto kana uchitamba mutambo. Uye, kana iwe uine inoenderana AMD kadhi yemifananidzo, ipapo iwe unogona kutora mukana weiyo yakavakirwa-yakavakirwa muFreeSync tekinoroji kubvisa chidzitiro kubvarura uye stutter kana uchitamba mutambo. Iwe zvakare unokwanisa kugona kufambidzana nechero-husiku husiku mitambo yemamarathoni, sezvo iyo tarisiro iine screen mode iyo inoderedza kusvibiswa kune bhuruu mwenje kuburitsa uye kunobatsira kudzivirira kuneta kwemaziso.
Iri giredhi repamusoro widescreen LED 27 ”color monitor inopa HDMI, VGA, BNC & 4in1 zvigadzirwa. Iine yekuwedzera BNC kusunungura & 4in1 zvakabuditswa, kuita kwayo kwakawanda kunoitendera kuti ishandire chero chishandiso. Boasting 16.7 mamirioni Ruvara & FHD Kugadziriswa ino monita ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
CCTV yekutarisa PX240WE
Iri giredhi repamusoro widescreen LED 23.8 ”color monitor inopa HDMI, VGA, BNC & 4in1 zvigadzirwa. Iine yekuwedzera BNC kusunungura & 4in1 zvakabuditswa, kuita kwayo kwakawanda kunoitendera kuti ishandire chero chishandiso. Boasting 16.7 mamirioni Ruvara & FHD Kugadziriswa ino monita ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
CCTV yekutarisa PX220WE
Iri giredhi rehunyanzvi widescreen LED 21.5 ”color monitor inopa HDMI, VGA, BNC & 4in1 zvigadzirwa. Iine yekuwedzera BNC kusunungura & 4in1 zvakabuditswa, kuita kwayo kwakawanda kunoitendera kuti ishandire chero chishandiso. Boasting 16.7 mamirioni Ruvara & FHD Kugadziriswa ino monita ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
Iri giredhi rehunyanzvi widescreen LED 55 ”4K color monitor inopa DisplayPort, HDMI, VGA, Looping BNC, Audio In. Iyi yekutarisisa inopa kururamisa kwakanyanya uye kururamisa kwemavara, muhukuru hwakakwana kuti ushandiswe mune chero nzvimbo. Iyo simbi bezel ndeyemhizha yekupedzisa inopa kugadzikana uye kuvimbika pamusoro pehupenyu hweyuniti.
Iri giredhi rakakura widescreen LED 23.8 ”color monitor inopa HDMI, VGA, & BNC zvinopinda. Iine yekuwedzera BNC yekukochekera kuburitsa kugona kwayo kunoitendera kuti ishandire chero chishandiso. Boasting 16.7 mamirioni mavara & FHD Kugadziriswa ino tarisa ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
CCTV yekutarisa PA270WE
Iri giredhi repamusoro widescreen LED 27 ”color monitor inopa HDMI, VGA, & BNC zvinopinda. Iine yekuwedzera BNC yekukochekera kuburitsa kugona kwayo kunoitendera kuti ishandire chero chishandiso. Boasting 16.7 mamirioni mavara & FHD Kugadziriswa ino tarisa ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.
Iri giredhi repamusoro widescreen LED 23.8 ”color monitor inopa HDMI uye VGA zvinopinda. IPS pani, inozvirumbidza mamirioni 16.7 ruvara & FHD Kugadzirisa ino tarisa ichaita kuti vhidhiyo yako ive yehupenyu.